DISTRIKAN’I MANANJARY : Zazavavy 9 taona voaolana tany am-pamonjena alim-pandihizana
Mirongatra izay tsy izy tato ho ato ny trangana fanolanana, herisetra amin’ny alalan’ny vono, tsy fanajana ny zon’olombelona izay amin’ny endrika maro samihafa. 12 avril 2019
Matetika ireo zaza tsy ampy taona avokoa no tena lasibatra amin’izany. Vokatry ny firoboroboan’ny teknolojia, fanarahan-drenirano ny fombafomba vahiny, ireo no antony voalaza fa isany tena mampirongatra ny fanolanan-jaza amin’izao fotoana. Toy ny zava-nisy tany amin’ny Fokontany Seranana Kaominina Andonabe Distrikan’i Mananjary ny alin’ny 7 avrily lasa teo izao dia zazavikely vao sivy taona monja no voaolana tany anaty alim-pandihizana iray ao an-toerana.
Voalazan-dRazafindravao reniny, niteraka azy moa fa namonjy alim-pandihizana tamin’ny toeran-kafa niaraka tamin’ny namany ity zazavavy ity. Tamin’izay fotoana izay no nitranga ny fametavetana niampy fikasihan-tanàna ilay zaza. Nalaina tovolahy iray an-keriny ka tsy navelany raha tsy potika tanteraka ny fivaviany, voarangotra hatramin’ny tendany mihitsy aza ary naratra mafy ity farany. Raha ny angom-baovao voaray hatrany dia nanaraka fitsaboana tao amin’ny CsbII ao Andonabe ity niharan-doza tamin’ny sivy avrily teo ity.
Voatery nalefa tao amin’ny hopitalibe Mananjary kosa ny alarobia teo raha toa ka tena mbola natahorana mafy ny fahasalamany. Nolazain’ity renim-pianakaviana tamin’izany fa ny fianakavian’ny lehilahy nahavanon-doza no miantoka ny lany rehetra amin’ny fitsaboana.
Zaza tsy ampy taona mamonjy alim-pandihizana ?
Nanaitra ny sain’ny mpanara-baovao avy hatrany ity tranga iray ity satria dia nipetraka ny fanontaniana hoe “ zazakely tsy ampy taona ve no efa mamonjy alim-pandihizana sahady ? Aiza ho aiza ny fitsipika mifehy eo amin’ny zanaka sy ny raiaman-dreny ? Iaraha-malala ihany koa mantsy fa samy manana ny fomban-taniny ny Faritra maro eto Madagasikara saingy tokony handraisana andraikitra goavana, fepetra hentitra hamongorana ny toe-javatra tahaka izao. Ilaina hamafisina rahateo koa ny sazy henjana mihatra amin’ireo lehilahy tratra manao izany noho ny tsy fanajana ny zon’ny zaza amam-behivavy mirongatra loatra tato ho ato.